अनौठो मन्दिर, जहाँ भ्रष्टाचारी पस्न पाउँदैनन्, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अनौठो मन्दिर, जहाँ भ्रष्टाचारी पस्न पाउँदैनन्
एजेन्सी। हिन्दु धर्ममा अनेक शक्ति पिठहरु रहेका छन् । हरेक देवीदेवताको फरक विशेषता हुने गर्दछन् । यस्तैं एउटा अनौंठो मन्दिर भारतमा रहेको छ । अहिले धेरै देशहरुमा भ्रष्टाचारको समस्या रहेको छ ।
यस्तै मठ मन्दिर, मस्जिदलगायतका धार्मिक स्थानमा अन्य धर्मका मानिसलाई प्रवेश निषेध गरिएको भन्ने कुरा अलिक पत्याउन गाह्रो हुन्छ । तर, यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय भने फरक छ ।
एउटा मन्दिरमा भ्रष्टाचारीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । विश्वकै यस्तो मन्दिर हो यो जहाँ भ्रष्टाचार गर्ने मानिसहरु छिर्न पाउँदैनन् ।